Soo Iibso Budada Maca Root ee Soosaarida Caanaha Naaska, Badhida & Miskaha - Gelinta Bilaashka ah & Cashuur La'aanta | WoopShop®
Budada Maca Root Soosaarida Budada Naasaha, Badhida & Miskaha Kobcinta
$ 40.99 qiimaha joogtada ah $ 67.99
Budada Maca Root Soosaarida Budada Naasaha, Badhida & Miskaha Kobcinta - 100 g gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: Maca Root Extract
Lambarka Moodalka: G432
Maca Root Soo saar budada 10: 1
Waxaa jira cabirro kala duwan oo la heli karo. Fadlan laba-hubi cabbirka aad dooraneyso.
10: 1 Waxaa loola jeedaa 10LB ee Root Maca Root waxaa loo isticmaalay in laga soo saaro 1LB ee Powderkan
Faa'iidooyinka Maca Root:
Maca xididka Maca wuxuu leeyahay faa iidooyin badan, wuxuu kordhin karaa adkeysiga iyo heerarka tamarta, wuxuuna kaa caawin karaa daaweynta cudurada u dhexeeya niyadjabka ilaa kuwa badan. Sidoo kale, xididka makaak ayaa badanaa la isticmaalaa halkii lagu beddeli lahaa daaweynta hoormoonka haweenka menopausal, xididka maca wuxuu ka caawiyaa isu dheellitirka hormoonnada iyada oo aan waxyeello u geysan jirka dumarka.
Dumarku waxay isticmaali karaan waxyaalaha xididdada ka sameysta makaanka si ay uga caawiyaan la dagaallanka dhalmo la'aanta sidoo Maca sidoo kale waxaa loo tixgeliyaa inay waxtar u leedahay yareynta calaamadaha caadada. Maaddaama qaar badan oo ka mid ah astaamahan ay u muuqdaan inay si toos ah ula xiriiraan awood la'aanta jirku inuu si buuxda u soo nuugo fiitamiinnada iyo macdanaha uu u baahan yahay, sifooyinka maca ee antioxidant-ka iyo tayada dheellitirka hoormoonku waa hab wanaagsan oo looga hortago taas. Maca wuxuu wax ku ool ku noqon karaa baabi'inta ololka kulul iyo niyadjabka iyo kordhinta heerarka tamarta.
Badiyaa waxaa loo yaqaan "Peruvian Ginseng", Maca waa xidid gaar ah oo xidid leh oo leh adeegsiga oo dib ugu soo laabtay bartamihii qarnigii 15aad. Dadka asal ahaan ka soo jeeda aaggan waxay cuneen iyadoo ceyriin ah, la kariyey, ama la kariyey waxayna ku noqotay cunno maalmeedkooda. Ka soo horjeedda suugaanta qaarkood oo tilmaamaya isticmaalkeeda 2000 sano ka hor si loo adkeeyo istaandarka, tani si sax ah uma saxan.
Runtu waxa weeye, dhulka qallafsan ee gobolkan ayaa dhib ka dhigay in la beero cunno sidaa darteed inta badan cuntada bulshada waxay ku tiirsaneyd walxo duurjoog ah laga soo ururiyey, sidaa darteed Maca waxaa lagu daray cunnadooda maalinlaha ah. Waxay u egtahay dabocase runtiina waa qaraabo dhow sidoo kale. Xaaladaha sii kordhaya waa kuwo gaar ah oo waxay ku kobci doonaan oo kaliya barafyada dhalaalaya ee Andes iyadoo heerka ugu sarreeya ee 12,000 ilaa 15,000 cag ka sareyso heerka badda.
Waqtigan xaadirka ah, waddanka Peru wuxuu si weyn u kabaa oo u bartaa faa'iidooyinka xididkan, warbixino dhowr ah oo ka soo baxay hay'adaha waxbarashada iyo sayniska ayaa muujiyay (120-200%) koror xoog leh oo adkaysi, adkeysi jireed, la qabsiga xaaladaha walaaca leh. In kasta oo macluumaadkan aan si fiican dib loogu eegin ama wax badan looga baran meel ka baxsan dalka Peru, markhaatiyada isticmaalayaasha ee dhowrkii sano ee la soo dhaafay ayaa xusid mudan